कोरोना जितेर घर फर्किनेको संख्या १ हजार नाघ्यो, सोमबार ६७ जना डिस्चार्ज - News Birat
काठमाडौं, १ असार-पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएर ६७ जना घर फर्किएका छन् । घर फर्किएका मध्ये ७ महिला र ६० पुरुष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा जनकपुरको कोभिड-१९ अस्पतालबाट २४ जना पुरुष, ललितपुरको पाटन अस्पतालबाट ३ महिला र १ पुरुष गरी ४ जना, कोभिड-१९ युनिफाइड कमाण्ड अस्पताल, बलम्बुबाट २ महिला, शिक्षण अस्पतालबाट १ महिला र १ पुरुष गरी २ जना, कलैया अस्पताल बाराबाट ६ पुरुष, सप्तरीको साहीकृष्ण आइसोलेसनबाट १७ पुरुष, कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्ड दाङबाट १ महिला ११ पुरुष गरी १२ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणलाई जितेर डिस्चार्ज हुनेको संख्या १ हजार नाघेको छ । प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार नेपालमा सोमबारसम्म १ हजार ४१ जनाले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई जितेर घर फर्किएका छन् । जसमा ९३७ जना पुरुष रहेक छन् भने महिला १०४ जना रहेका छन् ।
सोमबार, १ असार २०७७, १८:१६ June 15, 2020 मा प्रकाशित